मदनदाइले भावुक बनाउँदा ~ brazesh
Luna October 7, 2008 at 5:38 AM
अहिले सम्म शा काहारी भएकी छैन तर यि यस्ता भाबनात्मक कुरा सुनिरहदा चट्टक्क मासु खान छोडौ जस्तो हुन्छ । छिट्टै नै छोड्छु पनि होला । (हरेक पटक मासु खादा भित्री मनमा सन्तोष हुँदैन )
यो त भयो आँफै सँग आँफैलाई चित्त नबुझेको आफ्नै कुरा । साच्चै भगवान को नाममा किन यसरी पशु बली दिन्छ मान्छे ! भगवान भन्ने अनी प्राणी को हत्या भगवान को नाममा गर्ने ! यि यस्ता कु - सस्कार लाई अबका शिछित समाज ले प छ्याउनु शोभा दिदैन ।
मासु स्बास्थ्य को लागि हितकर त हुँदैन तथापी जो जस्ले खान्छन कम्तिमा पनि भगवान को नाम मा नखाइदिउन अर्थात भगवान को नाम मा बली दिएर कु - सस्कार लाई निरन्तरता नदिउन ।